Bixiyeyaasha McKnight waxay heli karaan jawaabo deg-deg ah su'aalaha caadiga ah ee codsadaha iyo habka warbixinta. Waxay sidoo kale heli karaan qalabka isgaarsiinta iyo tilmaamaha ku saabsan sida loo wadaago warka ku saabsan deeqda dhowaan. Waxaan sidoo kale ku xirnaa deeq bixiyeyaasha macluumaadka u baahan inay ka codsadaan goob kulan oo ka dhacda McKnight.
Fadlan la soco: Sababo la xiriira saameynta coronavirus, McKnight wuxuu hirgaliyay muddo seddex bilood ah oo dheeri ah oo lagu kordhinayo dhammaan warbixinnada jadwalka bixinta. Intaa waxaa sii dheer, inta lagu jiro xaaladdan aan horay loo arag, deeq bixiyayaashu waxay la hadli karaan xiriirkooda barnaamijka si ay u weydiistaan wax ka beddelka suurtagalka ah ee heshiisyada deeqdooda, sida ujeedka deeqda ama qaab dhismeedka waqtiga.
Waxaan ka feejignaanahay in ururradu ay wajahayaan caqabado aad u weyn oo ay sababaan masiibada, waxaanuna higsanaynaa inaan culayska ka saarno qaar ka mid ah deeq bixiyayaasha. Waxaan qiimeyneynaa fahamkaaga iyo fikradahaaga - fadlan la xiriir xiriiriyahaaga aasaasiga ah ama farriin noo soo dir annaga Nagala Soo Xiriir Bogga internetka.
Mu'asasada 'McKnight Foundation' waxay dhowaan ku dhawaaqday isbedelo ku yimid qaar ka mid ah barnaamijyadeeda deeqda ah.
Haddii aad raadineyso macluumaad ku saabsan isbedeladaan iyo sida ay u saameyn karaan deeqdaada, fadlan tixraac kuwayaga dhawaaqii dhawaa iyo Bogga kheyraadka marinka wareejinta deeqaha.
SIYAASADDA ISTICMAALKA IYO WARBIXINTA
Diiwaangelinta Xisaabaadka Dhibaatada
Waxaan dhibaato ku qabaa in aan galo akoontiga internetka ee ururka. Maxaan sameeyaa ama yaan la xiriiri karaa?
Haddii aad illowday ereygaaga sirta ah, riix 'Password Forgot Password' bogga bogga xisaabtanka oo raac dalladaha.
Haddii aad ubaahan tahay inaad ku wareejiso emailkaaga xisaabta xisaabtaada, riix "Su'aalo?" Bogga fariinta si aad u dirto email adoo codsanaya isbedelka. Bixi magacaaga ururka, cinwaanka xisaabta emailka hadda, iyo email cusub.
Sida loo bilaabo Codsi Cusub
Sideen u bilaabaa codsi cusub?
Si aad u bilowdo codsi cusub, riix "Codsiga Bilowga" bogga barnaamijka ku habboon ee bogga McKnight. Wixi barnaamijyada casuumada kaliya, raaco xiriirka ku jira casumaadda emailkaaga.
Si aad dib ugu noqotid codsiga horeyba u socdey, guji "Soo gal" oo ka socda bogga McKnight si aad u hesho koontadaada.
Kala duwanaanshaha, Sinnaanta, iyo Iskuduwaha Foomka Dadweynaha
Waa maxay foomka kala duwanaanshaha, sinaanta, iyo isudiyaarinta?
Akhri tan post post si aad wax badan uga barato sababta McKnight ay u ururinayso xogta dadweynaha iyada oo qayb ka ah habka codsiga deeqaha.
Horudhac: Foomka warbixinta ee DEI ayaa diyaar u ah inay helaan deeq-bixiyeyaasha mustaqbalka ee qorshayntaada. Fadlan ha buuxinin foomkan pdf. Habka kaliya ee loo gudbiyo xogta waa iyada oo loo marayo habka codsiga internetka. Intaa waxaa dheer, waxaan jeclaan lahayn inaan tilmaamo tan xaashi sax ah laga soo bilaabo Isbahaysiga D5 sida suurtagalinta khayraad waxtar leh oo loogu talagalay kuwa billaabaya inay ka fekeraan habka ururinta macluumaadka dadweynaha. Our bogga waxay bixisaa khayraad dheeraad ah oo ku saabsan DEI.
Waxaan fahamsanahay in qof kasta uusan awoodi doonin inuu bixiyo macluumaadkan isla markiiba, waxaana jira xulasho codsadayaasha si ay u bixiyaan xuddun shaqadooda. Waxaan ku dhiirigelineynaa deeq-bixiyeyaasha in ay bilaabaan sheekaysiga guddiga iyo shaqaalahooda ku saabsan doorka kala duwanaanta, sinaanta, iyo ka-qaybgalka (DEI) ee ka ciyaaraya ururkooda iyo bulshadooda.
Xaqiijinta Ogeysiiska Codsiga
Sideen u sheegi karaa haddii McKnight uu helay codsigayga ama warbixinteyga?
Nadaamka internetku si toos ah ayuu u soo saari email u dir cinwaanka hudheelka akhbaarta mar kasta oo codsi ama shuruud la keydiyo ama la soo gudbiyo.
Ku gal koontadaada oo dooro labada "Araajida" ama "Shuruudaha" tab. Xulo "Codsiyada Gudbiyay" ama "Shuruudaha Soo Gudbinaya" ee laga soo qaaday liiska hoos-hoosaadka. Liistada liiska alaabooyinka la soo gudbiyay ayaa ka muuqan doona barooska cas.
Sidee baan u heli karaa warbixinta warbixinta la iga rabo, iyo goorma?
Ku gal koontadaada oo xulo "Shuruudaha" tab. Xulo "Shuruudaha Cusub" ama "In Shuruudaha Horumarinta" laga bilaabo liiska hoos-hoosaadka. Liiska liistada shuruudaha furan ayaa ka muuqan doona garsoorka cas oo leh taariikhda ugu danbeysa (s).
Sidee loo xareeyaa lifaaqyada
Dhibaato ayaan ku qabaa inaan ku dhajiyo lifaaqyada loo baahan yahay. Miyaan ku dhajin karaa lifaaqayga aniga oo jooga mashiinka McKnight?
Laga soo bilaabo gudaha codsiga ama foomka looga baahan yahay, dooro "Su'aalo?" Si aad u-dirto caawiyaha barnaamijka / maamulaha su'aalaha gargaarka farsamada. Ha u dirin lifaaqyada si toos ah qofkasta at McKnight. Dhammaan codsiyada iyo shuruudaha loo baahan yahay waa in lagu soo gudbiyaa nidaamka internetka.
McKnight Logo Adeegsiga iyo Tilmaamaha Jilayaasha
Ma heli karaa nuqulka qoraalkaaga? Waa maxay tilmaamaha nooca iyo qaabka muuqaalkaaga?
Waxaad awoodi kartaa soo qaado faylka la fureen oo ay ku jiraan dhammaanba fursadaha logo ee McKnight. Astaanta ayaa lagu heli karaa laba midab (casaan iyo casaan), laba jiheyn (ballaaran iyo qiyaas), iyo saddex nooc oo fayl ah (.eps, .jpg, iyo .png). Marka laga tago xuduudahaan, wax kala duwanaansho ah ee muuqaalka ama daaweynta waa la oggol yahay.
Mashruucyada ka shaqeeya mashruucyada isgaarsiinta ee McKnight waa inay la tashadaan Xeerarka astaanta McKnight. Buuggan waxaa ku jira shuruudo muhiim ah iyo shuruudaha la xiriira isticmaalka calaamadeynta, gawaarida, gogolka midabka, iyo qaybaha kale ee aqoonsiga muuqaalka McKnight.
Luqad Boorsab Luqad
Waxaan jecel nahay in aan qoro war saxaafadeed ama qoraal ku saabsan deeqdeena cusub. Sideen u sharaxnaa Xarunta McKnight Foundation?
Haddii aad jeceshahay inaad kudarto qoraal ku saabsan McKnight dhamaadka siidayntaada ama ogeysiiskaaga, fadlan isticmaal luqadaha boilerplate-ka ah ee la oggol yahay (la cusbooneysiiyay Disembar 2019):
Mu'asasada 'McKnight Foundation', oo ah aasaaska qoyska ee fadhigiisu yahay Minnesota, ayaa horumariya cadaalad, hal abuur, iyo mustaqbal aad u badan halkaasoo ay dadku ku nool yihiin. Waxaa la asaasay 1953, McKnight Foundation waxay si qoto dheer uga go'antahay horumarinta xalalka cimilada ee Midwest; dhisidda Minnesota loo wada dhan yahay oo loo dhan yahay; iyo taageerista fanka ee gobolka Minnesota, neerfaha, iyo cilmi baarista dalaga caalamiga ah. Mu'asasada ayaa leh qiyaastii $2.3 bilyan oo hanti ah waxayna ku kacdaa qiyaastii $90 milyan sanadkii.
Fadlan ogow in tirada hantida iyo tirakoobka wax ku kala duwan yihiin sanad kasta.
Deeqaha Deeqaha Waqtiga, Hannaanka, iyo Iskaashiyada
Ma jiraan wax tilmaamo ama xayiraad ah oo ku saabsan sida aan u wadaagi karno wararka ku saabsan deeqdeena McKnight?
Deeqdu waa inay xor u tahay inay wadaagaan wararka ku saabsan abaalmarinta deeqda, waxqabadyada deeqaha lagu taageerayo, iyo saameynta barnaamijka iyo natiijooyinka. Wadaagista macluumaadka ku saabsan waxqabadyadaada taageerada waxay kor u qaadi kartaa aragtida mawduucyada muhiimka ah, sii wadaan ama kor u qaadaan tamar wanaagsan, iyo dhiirigelinta isticmaalka baahsan ee habdhaqanka iyo casharrada laga barto.
Marka ugu horeysa ee lagu dhawaaqo maaliyadda, guud ahaan waxaan codsanaynaa in deeq bixiyayaashu ay sugaan illaa iyo ka dib marka McKnight ay soo bandhigto ogeysiisyo rasmi ah oo rasmi ah, illaa hal bil kadib oggolaanshaha guddiga. Waxaanu u furanahay inaan ka dhigno waxyaabo macquul ah. Bixiyeyaasha doonaya inay ku dhawaaqaan horraan ujeedo gaar ah oo istaraatiijiyadeed waa inay la xiriiraan xubin ka tirsan kooxda isgaarsiinta (612) 333-4220 ama communications@mcknight.org.
Ka sarreeya korka, Foundation ma xaddidayo sida ama deeq bixiyayaashu ku dhawaaqayaan maalgelinta McKnight. Deeqda looma baahna inay noo sheegaan miisaaniyad, inkastoo aan u malaynayno in McKnight Foundation uu ku jiro liiska maaliyadaha kale ee hadda jira halka haboon. Boggani wuxuu ku xiran yahay calaamadkayaga, waraaqda bootinta, iyo buug-gacmeedyada garaafka.
McKnight ma filayo in uu dib u eego ama ansixiyo warbaahinta madaxa banaan ee deeqaha ama suuq geynta. Markaa codsiga deeqbixiyaha, si kastaba ha ahaatee, waxaanu diyaar u nahay inaan xaqiijino saxnaanta saxda ah ee McKnight ama deeqda alaabtaada.
Wixii xiriir ah, wada shaqeyn joogto ah ama istiraatiijiyado iyo qalab isgaarsiineed oo xooggan, fadlan si toos ah ula xiriir McKnight Communications communications@mcknight.org.
Sida aan u wadaagno wararka ku saabsan deeqaha
Muxuu McKnight ka wadaagaa warka ku saabsan deeqaha loo ogolaaday dadweynaha?
Ku dhawaad hal bil kadib oggolaanshaha guddiga, shaqaalaha McKnight ayaa u diri doona qof kasta oo deeqbixiye ah ogeysiis rasmi ah oo ah maalgalin la ansaxiyey. Warqaddaas ayaa tilmaamaysa baaxadda shaqada la maalgeliyay, oo ay ka mid tahay xaddidaadyo, iyo faahfaahinta filashooyinka Aasaasiga ee warbixinta mustaqbalka iyo / ama lacago dheeraad ah. Waqtigaas oo kale, McKnight ayaa si fagaare ah u sii daayay wargelinta deeqda bixisa ee ku taala deeq bixiyayaal yar, oo dhammaan deeqda ay noqdaan kuwo laga helo deeqaha kaydka .
Wixii deeq bixiye kasta, macluumaadka soo socda ayaa la sii daayaa:
qaddarka maalgelinta la oggolaaday
Sanadka la ogolaaday
hal sharaxaad ku saabsan deeqda taageerada
degaanka barnaamijka McKnight
cinwaanka internetka ee ururka, haddii uu bixiyo deeq bixiyaha
Sida loo sii daayo McKnight News
Sideen u joogaa hadda wararka iyo horumarka McKnight?
Sida deeqbixiye, ururkaagu waa mid muhiim u ah McCnight. Waxaanu si joogta ah u wadaagnaa ogeysiisyada aasaasiga ah, oo ay ka mid yihiin horumarinta khaaska ah ee beesha, warar ku saabsan goobaha barnaamijyada, fikradaha shaqaalahayaga, iyo faahfaahinta ku saabsan warbixinnada cusub ee cilmi baarista iyo fursadaha cusub.
Si aan kuu gaarsiino, waxaan isticmaali karnaa cinwaan kasta oo e-mail ah oo ururkaagu kuu yahay qayb ka mid ah habka codsiga deeqdaada. Haddii ay jiraan isbeddelo ku yimaada shaqaalaha ku haboon, fadlan la soo xiriir kooxda maamulka deeqda ah apply@mcknight.org. Shaqaale dheeraad ah ama la-hawlgalayaasha ayaa sidoo kale saxiixi kara boggeena internetka waxaad u soo dirtaa boostada emailka ee McKnight.
Fadlan hubso inaad ku darto cinwaanada soo socda "liisaska amaanka leh" liiska: apply@mcknight.org iyo communications@mcknight.org.
Intaa waxaa dheer, hubi inaad na soo raacdo Twitter iyo Facebook xisaabaadka. Ka dib markaad nala socoto Facebook, riix "Fiiri First" boggayaga ama kala mudnaanta machad McKnight ee ku saabsan doorashooyinkaaga quudinta wararka si aad u hubiso in boosteejooyinkeena ay ku dhammaato wargeysyadaada.
Haddii aadan horey u helin wararka McKnight, fadlan qoro liistada emailkeena.
Maxay yihiin noocyada goobaha kulan ee loo heli karo isticmaalka?
Isu-keenidda dadka si loo xoojiyo xiriirka iyo dhiirigelinta fikradaha cusub waa lagama maarmaan u ah sii wadida ujeedooyinka barnaamijka. Markay suurtagal tahay, waxaanu ka dhignaa meelayn kuleej ah oo loo heli karo dadka deeqda bixiya iyo ururada wadaaga ah Faahfaahinta booska buuxinta ee khariidadaha qolka, Awoodda A / V, iyo qaababka gaarka ah ayaa la heli karaa halkan.
Codsiga Kulanka Soogalootiga
Ma arki karaa liistada su'aalaha badanaa la isweydiiyo ee ku saabsan codsiyada boosaska kulanka?
Si looga caawiyo kooxaha samaynta codsiyada qolka, waxaanu soo ururinay jawaabaha su'aalaha badanaaba la isweydiiyo. Waa la arki karaa halkan.
Bixiyeyaasha hadda ah ayaa heli kara koontooyinkooda halkan.
Dukumeentigaan waxaa ku jira shuruudaha iyo shuruudaha muhiimka ah ee la xiriira isticmaalka calaamadaha, noocyada, palette, iyo qaybaha kale ee aqoonsiga muuqaalka McKnight.
Soo deji tilmaamaha
Soo qaado Logos